बस्दाखेरी गोडो हल्लाउने बानी छ ? यसरी सुधार्नुस् !
काठमाडौं, ३१ जेठ – केही मानिस बस्दाखेरी अनायासै गोडो हल्लाइरहेका हुन्छन् । धेरैजनाले यो बानी मात्र भएको ठानेर बेवास्ता गर्छन् । तर यो रेस्टलेस सिन्ड्रोमको लक्षण हो । के हो यो सिन्ड्रोम र यसबाट कसरी छुटकारा पाउने ? चर्चा गरौं ।